काेरिया बिशेस Archives - Sawal Nepal
-राजु श्री दक्षिण कोरिया । केही समय पहिला चीनको हुबेइ प्रान्तस्थित ऊहान शहरबाट फैलिएको कोरोना (कोभिड–१९) भाइरस संसारभर फैलने क्रममा छ । छोटो समयमा धेरै मानिसको ज्यान लिन सफल कोरोनाले यतिबेला संसारलाई चिन्तित तुल्याउनका साथै विज्ञानलाई समेत चुनौती थपिदिएको छ । किनकी हालसम्म यसको कुनै पनि निश्चित औषधि पत्ता नलागेको वैज्ञानिकहरुको भनाइ छ । अहिलेसम्म
लक्ष्मीनारायण बस्नेत / , के तपाईं कोरोनाकै कारण भिसा रद्द गरेर वा बिदा मिलाएर नेपाल जान लाग्नुभएको छ वा अलिक पछी जाम्ला भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ ? पख्नुहोस ! एकैछिन गहिरिएर सोच्नुस त ! कतै तपाईंले आफ्नो परिवार , छिमेकी ,समाज अनि देशलाई पनि सङ्कटमा त पार्दैहुनुहुन्न ?कोरियामा पनि चिनबाट आएकी एक महिलाको कारण नै स्थिति
सोल । दक्षिण कोरियामा प्राणघातक कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई रोक्न राष्ट्रपतिले ‘अभूतपूर्व, शक्तिशाली’ कदमहरूको लागि आह्वान गरेका छन् । तर पनि यस भाइरसबाट सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढेको सोमबार प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । केहीदिनदेखि सङ्क्रमितहरुको सङ्ख्या बढ्दै गएकोमा दक्षिण कोरियामा आइतबार थप १६१ जनामा थप सङ्क्रमण देखिएको छ । दक्षिण कोरियामा कुल सङ्क्रमितको सङ्ख्या ७६३ पुगेको सोमबार
कोरोना भाइरसको त्रासः इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया जाने नेपालीहरुको उडान सारियो
काठमाडौं । दक्षिण कोरियामा नोबेल कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएपछि त्यहाँ जाने तयारीमा रहेका नेपालीहरुको उडान सारिएको छ । यसैहप्ता दक्षिण कोरियामा जान तयार ५० जना नेपालीको उडान मिति सार्ने निर्णय गरिएको इपिएस कोरिया शाखाका प्रमुख कृष्ण खनालले बताए । इपिएसमार्फत दक्षिण कोरिया जान लागेका नेपालीहरुको उडान मार्च तेस्रो सातापछि गरिने उनले बताए । फागुन १८
कोरियाले रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) अन्तर्गत सन् २०२० का लागि नेपाललगायत अन्य १६ राष्ट्रबाट ५६ हजार विदेशी श्रमिक लैजाने माग गर्ने निर्णय गरेको छ । कोरियाको श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तर्गतको विदेशी कामदार नीति समितिको बुधबारको २७ औं बैठकले विभिन्न ६ भन्दा बढी क्षेत्रका लागि आवश्यक पर्ने विदेशी श्रमिकका कोटा निर्धारण गरेको हो । कोरियाका
कोरिया– आप्रवासी कामदारमाथि हुने विभेद अन्त्यको माग राख्दै दक्षिण कोरियामा मजदूरहरूले विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी कामदार दिवसको अवसर पारेर मजदूरहरुले आइतबार राजधानी सिउलमा विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनमा सहभागी मजदूरले आप्रवासी श्रमिकमाथि हुने शोषण दमन ,भेदभाव अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेका छन् । उनीहरुले औद्योगिक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युको अन्त्य हुनुपर्ने तथा आप्रवासन
कोरियामा नेपालीको अनुभव : कमाई राम्रो, जोखिम र दुःख धेरै
काठमाडौं । यतिबेला कोरिया नेपाली युवाहरुको रोजाइमा पर्ने देश हो । खाडी मुलुकहरुमा भन्दा सुविधा सम्पन्न र राम्रो आन्दानीका लागि कोरिया जानका लागि भाषा परीक्षा(ईपीएस)मा सहभागी हुने युवाहरुको संख्या बर्षेनी बढ्दो छ । यसबर्ष भाषा परीक्षाका लागि आवेदन दिएका ७४ हजार ८ सय ६६ जना सहभागी परीक्षामा ७ हजार ९९६ जना उत्तीर्ण भएका छन ।
सोल-दक्षिण कोरियाली नागरिकहरूले आफ्नै वर्णमाला ‘हान्गुल’ बारे गर्ब रहेको बताएका छन् । उनीहरुले यसको स्वर र व्यञ्जनको संयोजनमा गर्व रहेको बताएका हुन् ।कोरियाली भाषाको राष्ट्रिय संस्थानले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार ९२.१ प्रतिशतले ‘हान्गुल’ सुन्दर भनेका छन् भने ९१ .८ प्रतिशतले तर्कसंगत, र देश भक्तिभाव झल्कने बर्णमाला भएको भनेका छन् । त्यस्तै गरेर ८६ .८ प्रतिशतले
१. म आफनो सेवा अवधि सकेर नेपाल फर्कदै छु । म फर्कने दिन रातो विदा पर्छ, एयरपोर्टमा थेजिकमको पैसा बुझ्ने काउण्टर बन्द हुन्छ कि हुदैन ? जवाफः विदाका दिन पनि एयरपोर्टका थेजिकम बुझ्ने काउटर खुला हुन्छन् रातो विदाले कुनै फरक पर्दैन् । २. म कोरियामा ४ बर्ष १० महिना पुरा गरेर स्वदेश फर्कदै छु ।
कोरियामा बृहत रुमपा सामुहिक भाइटिका लगाइदै ,उपस्थितिको लागि सम्पूर्णमा अनुरोध
बिसेष गरि हिन्दु धर्मालम्बीहरुको महान चाड शुभ दिपावली तथा भाइटिकाको अवसर पारेर कोरियामा पनि सामुहिक भाइटिका लगाइने भएको छ l कोरियामा स्थापित महिलाको लागि महिला संस्था ( वुमन फर वुमन) को आयोजनामा नोभेम्बर ३ तारिखको दीन तिहार बिसेष शुभकामना आदानप्रदान तथा सामुहिक रुपामा भाइटिका लागाइने भएको हो l चाडबाडको बेलामा प्रवासमा रहदा बस्दा हुने नैराश्यपनालाई